July 26, 2013 – democracy for burma
U Aung Htoo,Burma Legal Advisers Help Land Grab Victims-VIDEO
On July 26, 2013 July 26, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Recent land reforms now allow farmers and land owners to be given compensation – even if the state still holds the deed. But as land disputes erupt across Burma, some worry the problem could grow along with foreign investments.
“When farmers are using the land to sustain themselves their communities are forced to sell their land where they don’t want to move. There isn’t any other land but the government oracompany is basically forcing them off their land. It’s forced compensation and they are being told inanumber of circumstances, either you take it or leave it,” said Donowitz.
ARAKAN TIMES: ရက္ခိုင့်တပ်မတော်မှ ၄ နှစ်ကျော်ဖြတ်သန်းလာခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံများဖြင့်ပေးသော အထူးတိုက်ခိုက်ရေး စစ်သင်တန်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံး
On July 26, 2013 July 27, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်မှ ၄ နှစ်ကျော်ဖြတ်သန်းလာခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံများဖြင့်ပေးသော အထူးတိုက်ခိုက်ရေး စစ်သင်တန်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံး
ရခိုင်အမျိုးသားများမှ ပေါ်ပေါက်လာသော “ရက္ခိုင့်တပ်မတော်” သည် စင်တင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်မှ ယခုအချိန်ထိ ၄ နှစ်ကြာ ဖြတ်သန်းလာခဲ့သော တချိန်လုံးမှာ စစ်ရေးအတွေ့အကြုံမြောက်များစွာကို ရရှိခဲ့ပြီး ထို့သို့ရရှိလာသော အတွေ့အကြုံများကို စစ်သည်၊ စစ်မယ်များအား အရည်အသွေးမြှင့်တင်လိုသောကြောင့် “အထူးတိုက်ခိုက်ရေး” စစ်သင်တန်းခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးကို သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
ထူးချွန်သော စစ်သည်တစ်ဦးအား တပ်မှူးချုပ် ထွန်းမင်းနိုင်မှ ဆုချီးမြှင့်နေစဉ်။
အဆိုပါ အထူးတိုက်ခိုက်ရေးသင်တန်းမှာ သင်တန်းသူ/သားများ ၉၃ ဦး ပါဝင်၍ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်၏ ၄ နှစ်ကြာတွေ့ကြုံခဲ့မှုများကို ၃ လကြာသင်ကြားပေးခဲ့ပြီး ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင်ပြီးဆုံးကာ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားတစ်ရပ်ကို ရက္ခိုင့်တပ်မတော်၏ ဌာနချုပ် ယာယီအခြေစိုက်ရာ မဟာမိတ် KIO နယ်မြေရှိ လှိုင်းစရာ စစ်သင်တန်း “ရက္ခသေနာ” ခန်းမတွင် အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်မှာ အင်အားတိုးလာပြီး စစ်သည်၊ စစ်မယ်များကိုလည်း အရည်အသွေးမြှင့်တင်လိုသောကြောင့် အထူးတိုက်ခိုက်ရေး စစ်သင်တန်းကို ပေးရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရက္ခိုင့်တပ်မတော်၏ စစ်ရုံးချုပ်၊ စစ်ဦးစီးမှူး ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး စောဝေနီမှ အာရ်ကန်တိုင်းမ်စ်သို့ ယခုလိုပြောသည်။
” ဒီနေ့ရက္ခိုင့်တပ်မတော်ဟာ အင်အားတဖြည်းဖြည်း တိုးလာတယ်။ အင်အားတိုးလာသလို တစ်ဖက်မှာလည်း အရည်အသွေးပိုင်းကိုပါ မြှင့်တင်ထားဖို့ လိုအပ် လာတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါမှာ လူတွေက တပ်မတော်တစ်ခုကို အရေအတွက်နဲ့ တိုင်းတာတတ်ကြတယ်။ လက်ရုံးရည်ရော နှလုံးရည်ပါ ပြည့်စုံပြီးတော့ နည်းမှန်လမ်းမှန် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကြိုးစားလေ့ကျင့်နေတဲ့ တပ်မတော်အဖြစ်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်က ရပ်တည်နိူင်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်အနေနဲ့ (၄)နှစ်ကျော်ကာလကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့တစ်ချိန်လုံးမှာ အတွေ့အကြုံအများကြီးကို ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ စစ်ရေးရော နိူင်ငံရေးရောပေါ့။ သက်တမ်းနုနယ်တယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ၂၀၁၁-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၉)ရက်နေ့ကနေ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲစဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာ အစအဆုံးပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲဟာ မြန်မာနိူင်ငံပြည်တွင်းစစ်သမိုင်းမှာ အကြီးအကျယ်ဆုံးနဲ့ အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုရရှိခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို စနစ်တကျ သုံးသပ်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ ဗျူဟာပိုင်း၊ စစ်မြေပြင်မှာလက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရမှုအပိုင်း၊ ရန်သူ့စစ်ပရိယာယ်၊ ရန်သူ့လက်နက်၊ အားသာချက်၊ အားနည်းချက် စတာတွေကို အသေအချာဆန်းစစ်ပြီး လက်တွေ့လေ့ကျင့်စေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ” ဟု သူပြောသည်။
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်မှ စစ်သည်၊ စစ်မယ်များအား သင်တန်းပေးခြင်းမှာ အမြဲတမ်းလိုလိုဖွင့်ပေးနေသော်လည်း ယခုသင်တန်းပေးခြင်းမှာ စစ်ရေးအတွေ့အကြုံများနှင့် ပေါင်းစပ်လေ့ကျင့်ရခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် အထူးပင် ထူးခြားမှုရှိကြောင်း ဆက်ဆိုသည်။ သင်တန်းသူ/သင်းများအတွက်လည်း သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက် ထူးချွန်းသော စစ်သည်၊ စစ်မယ်များကို “အောင်စစ်သည်ဆု၊ စာပေထူးချွန်ဆု၊ လက်ဖြောင့်ဆု၊ စစ်ရေးပြထူးချွန်ဆု၊ ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဓါတ်ဆု” စသော ဆုများကို ချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အထူးတိုက်ခိုက်ရေး သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားတွင် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်၏ တပ်မှူးချုပ် ထွန်းမင်းနိုင်မှလည်း သင်တန်းသူ/သားများအား တပ်မတော်ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်သားစရာတချို့ကို တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။
” တပ်မတော်တစ်ရပ်မှာ အရေအတွက်အရေးကြီးပေမယ့် အရည်အချင်းကပိုပြီးတော့ အဓိက ကျတယ်။ အရေအတွက်ပိုင်းကို ဦးစားပေးလွန်းအားကြီးရင်လည်း အရည်အချင်းပိုင်းမှာ အားနည်းသွားမှာကို စိုးရိမ်ရတယ်။ မိမိတို့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်ကတော့ အရေအတွက်ရော အရည်အချင်းပါ နှစ်ရပ်စလုံးကို ဦးစားပေးတည်ဆောက်နေခြင်း ဖြစ်တယ်။ မိမိတို့မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ လက်နက်အနေထားကိုလိုက်ပြီးတော့ တိုက်ပွဲပုံသဏ္ဌာန်ကို ဖော်ဆောင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ တော်လှန်သော တပ်မတော် တစ်ရပ်ရဲ့ ဆူကြုံနိမ့်မြင့် ကွာဟချက်တွေကို ခံနိူင်ရည်ရှိဖို့၊ သံန္နိဋ္ဌာန်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ခရီးဆက်ဖို့၊ ကြိုးစား ရုန်းကန် လှုပ်ရှားတိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တယ်။ မိမိတို့ရဲ့ လမ်းခရီးကို မည်သူမှလည်း တားဆီးလို့ရမှာမဟုတ်။ မည်သည့်စိန်ခေါ်မှုမျိုးကိုမဆို ထိုးဖောက်ကျော်လွှား တိုက်ခိုက်အနိူင်ယူသွားရမှာဖြစ်တယ်။ ” ဟု ပြောသည်။
မဟာမိတ် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်၏ အရာရှိကြီးများအပါအ၀င် သင်တန်းသူ/သားများ စုစုပေါင်း ၂၀၀ ကျော်တက်ရောက် ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ တက်ရောက်လာသော မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စား ကေအိုင်အေအရာရှိတစ်ဦးမှ သင်တန်းသူ/သင်တန်းသားများအား ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စကား ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် ရဲဘော်တို့၏ ကြိုးစားအောင်မြင်မှုများကိုလည်း ကျေနပ်အားရဝမ်းသာမိကြောင်း၊ ဆက်လက်ပြီး အောင်မြင်မှုများ ဆွတ်ခူးနိူင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းစကားများကို ပြောသွားကြောင်း ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး စောဝေနီမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
CREDIT SHARE ARAKAN NEWS
ရက္ခိုင့်တပ်မတော် အထူးတိုက်ခိုက်ရီးသင်တန်း သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီး
စစ်ရုံးချုပ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်၊ စစ်ရုံးချုပ်၊ လေ့ကျင့်ရေးဌာနမ ကြီးမှူးဖွင့်လှစ်သော အထူးတိုက်ခိုက်ရီးသင်တန်း၊ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို ဌာနချုပ် ယာယီအခြီစိုက်ရာမဟာမိတ် ကေအိုင်အိုနယ်မြီဟိ လှိုင်းစရာ စစ်သင်တန်းကျောင်း၊ “ရက္ခသေနာ” ခန်းမ၌ ဇူလိုင်လ(၂၄)ရက်နိတွင် ကျင်းပပြီးစီးခသ ည်။ အခမ်းအနားကို ရက္ခိုင့်တပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ်၊ မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ တာဝန်ဟိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စစ်ဦးစီးအဖွဲ့ဝင် အရာဟိကြီးများ၊ စစ်ကြောင်းမှူးများ၊ အရာဟိ၊ အရာခံ၊ အကြပ်၊ စစ်သည်၊ စစ်မယ် များ၊ အထူးဖိတ်ကြားထား သော ဧည့်သည်တော်များနှင့် သင်တန်းဆင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စုစုပေါင်း အင်အား (၂၀၀)ကျော်ခန့် တက်ရောက်ခသည်။ ထိုနောက် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ဟိသူများမှ အသီးသီးစကားပြောကြားခကတ်ပြီး ထူးချွန်ဆုရဟိသူများ ကို ဆုများ အသီးသီးချီးမြှင့်ခကြောင်း သိဟိရသည်။
ရက္ခိုင့်တပ်မတော် – သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
Press council to submit media bill directly to Parliament
On July 26, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
CREDIT EMG 26.JULY 2013
STOP KILLING PRESS
Myanmar Press Council (Interim) will submitamedia bill directly to the Parliament following disagreement with the Ministry of Information over revision of the draft version.
The Press Council made the decision to submit its version of the media bill throughaMP at the meeting with two deputy ministers and the Lower House’s Sports, Culture, and Public Relations Development Committee on July 24 after the deputy ministers decline to state clearly whether or not the Ministry will submit the bill to the Parliament.
After both parties discussed about the Printing and Publishing Enterprise bill, which was drafted by the Ministry, and the media bill, which was drafted by the press council, they agreed on 51 provisions but dispute over 17 provisions continues.
“Our bill includes 17 provisions that the Ministry of Information does not like. That’s why we’ll be submitting it directly throughaMP,” said Zaw Thet Htwe, member of the press council.
“There used to be only one law for the media. The press council was commissioned to amend this [law]. After we were commissioned, the Ministry of Information submitted another one so there are two laws. They say they have separated this issue into half. It’s like divingacoin intoahalf. They are separating something that cannot be divided into two,” said Pe Myint, another member of the press council.
U Pe Myint said that the press cannot do anything without publications so the Ministry is restricting press freedom in their press bill.
Ye Htut, one of the two deputy ministers, said the conflict between the Ministry and the press council is due to longing and anxiety. While the Ministry is anxious as the country passes throughanascent reform, the press longs for freedom as they have lived under oppression.
In response to Ye Htut, Kyaw Min Swe said:”A law cannot be drafted based on longing and anxiety because [the country] is changing from one system to another. It’s typical to have doubts and suspicions on each other during this period. Problems will arise if ethics are drafted with these suspicions. In order to haveaflourishing democracy, the law has to be drafted without these [suspicions]. If the law was drafted with doubts and suspicions, there could be violence, problems, and protests after it has been enacted.”
Kyaw Min Swe added that the media bill will be submitted to the Parliament through the Sports, Culture, and Public Relations Development Committee withinafew days.
Thura Aye Myint, chairman of the Sports, Culture, and Public Relations Development Committee, said the committee accepts the media bill and will quickly submit it to the Parliament.
U WIRA THU 26.JULY: “ဦးဝီရသူထံ SBS Special Broadcasting Service- TV လာရောက်အင်တာဗျူး”
“ဦးဝီရသူထံ SBS TV လာရောက်အင်တာဗျူး”
26.7.2013 မနက် 8:00 နာရီ ဓမ္မစေတိယကျောင်းဆောင်မှာ လက်ခံတွေ့ဆုံဖြေကြားခဲ့သည်။
လာရောက်မေးလျှောက်သူမှာ Australia နိုင်ငံ Special Broadcasting Service-ရုပ်/သံ သတင်းဌာနမှ VJD Video & Journalist သတင်းထောက် Mr Evan Williams -ဖြစ်သည်။
ဦးဝီရသူ တည်ထောင်သော လောကအလင်း ကျူရှင်ကျောင်းသို့ လိုက်လံသတင်းယူခြင်း၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ အစမ်းစာမေးပွဲသို့ လာရောက်ရိုက်ကူးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မနက်ဖြန် ရှမ်းပြည်ခရီးစဉ်ထိ လိုက်ပါသတင်းယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
8.6.2012 မောင်တော အကြမ်းဖက်မှုကြီး ဗီဒီယိုဖိုင်လ်ကို ပြသလိုက်မှ ရခိုင်သတင်းပြောင်းပြန်ကြီး ကြားသိထားရကြောင်း မှတ်ချက်ပြုသွားခဲ့သည်။
အစိုးရထုတ်ပြန်ထားသော ၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကိန်းဂဏန်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂသို့ လိမ်လည်တင်ပြထားသော အစီရင်ခံစာပါ။ ၂၀၀ ကျော်ဟူသော ကိန်းဂဏန်းများကို မယုံကြည်ဖို့ ဦးဝီရသူက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ALL MEDIA RUNNING TO GET INTERVIEW FROM VENERABLE SAYADAW U WIRA THU 🙂
Mr Evan Williams –
Australia နိုင်ငံ Special Broadcasting Service-ရုပ်
On July 26, 2013 August 3, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
(Order No. 26/2013)
3rd Waning of Waso, 1375 ME
(25th July, 2013)
Under the sub-sections (a) and (d) under the Section 234 of the constitution of the Republic of the Union of Myanmar and Para (9), sub-section (b) under the Section 16 of the Union Government Law, Dr Aung Kyaw Myat, Director-General of the Advanced Science and Technology Department has been appointed as Deputy Minister for Science and Technology.
Under the Section 234 of the constitution of the Republic of the Union of Myanmar and Para (9), subsection (b) under the Section 16 of the Union Government Law, the following persons have been appointed as deputy ministers of ministries shown against each.
(1) Dr Win Myint President Office Ministry (1)
(2) Dr Zaw Min Aung Ministry of Education
(3) U Htin Aung Ministry of Labour, Employment and Social Security
(4) U Myint Thein Ministry of Rail Transportation
(5) U Ba Shwe Ministry of Science and Technology
Appointment of Chief of Myanmar Police Force
Under the Section 208 of the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar and the Section6of Civil Servant Law, Deputy Chief of Myanmar Police Force Police Brig-Gen Zaw Win of the Ministry of Home Affairs has been appointed as Chief of Myanmar Police Force.
The President’s Office of Myanmar announced another major reshuffle of its government cabinet on Thursday, but observers say the reshuffle may be not enough to tackle vast corruption among some government ministries. Continue reading “PRESIDENT OFFICE: Appointment of Deputy Minister,Deputy Ministers Reshuffled ,Appointment of Chief of Myanmar Police Force” →
Statement on the meeting between TNLA and UPWC
PANGLONG NEWS 26.JULY 2013
US Embassy, Ministry of Culture will preserve Shwe Nan-Daw Monastery
On July 25, U.S. Ambassador Derek Mitchell and Deputy Minister of Culture U Than Swe met in Mandalay to announceahistoric new partnership between the U.S. Embassy and the Ministry of Culture to undertake the cultural preservation of the Shwe Nan-Daw Monastery (Shwe Kyaung). The project builds on several initiatives by the Embassy to work with the government and civil society groups on promoting respect for the diverse cultures and religions of this country.
Shwe Nan-Daw Monastery is one of the most visited monasteries in the country. It formerly served as the northern chamber of Mandalay’s Glass Palace, and it is the only apartment of the former 19th century Kon Baung palace to survive World War II. The original chamber was built by King Mindon, who died inside, and later moved to its current location and refurbished asamonastery by King Mindon’s son, King Thibaw.
Marine police to be stationed in Rakhine’s port cities
A MPF official says the chosen location for the base include Sittwe and Kyaukphyu for MPF offices, which will take responsibility for security in Myanmar’s waters.
According to Rakhine Conflict Investigation Commission’s report, Myanmar will take security measures of Rakhine coast such as strengthening naval forces, using seaside radars, patrol planes, CCTVs and assault boats by forming marine police and coastal police forces.
A company of marine police force will be deployed at Kyaukphyu port while two platoons will be stationed in Sittwe and Thandwe ports.
“Marine police forces are tasked with preventing offenses in the country’s waters, cooperating with police forces from neighbouring countries in tackling transnational crimes and rescuing natural disaster victims at sea,” said an official from Sittwe Marine Police Force.
“Rakhine coast borders both the land and waters of Bangladesh, where people cross in and out illegally. We need not only naval forces but also marine police forces for security. We have learned Sittwe will have onlyaplatoon of marine police. So it is necessary to havealarger force and use modern weapons and high speed boats like in Bangladesh,” saidaMaungdaw local resident.
About three years ago,arobbery gang of Bengalis reportedly robbed some villages of Maungdaw and Yathedaung townships in Rakhine state and raided the outposts of border immigration control forces. After committingarobbery, those Bengalis reportedly went into hiding through the water route. They also committed other offenses such as robbing cattle, stealthily catching fish and smuggling drugs.
Sittwe used to have marine police forces and customs patrol watercraft 40 or 50 years ago.
Marine Police Force was formed under Myanmar Police Force on July9last year following communal violence in Rakhine state in June.
“China should help keep Myanmar-China border stabilized and peaceful,”
credit emg 25.july 2013
Senior General Min Aung Hlaing, the current commander-in-chief of the Myanmar Armed Forces, urged General Fan Changlong of China’s the People’s Liberation Army during their encounter on July 23 in Nay Pyi Taw, the official capital of Myanmar, according to state media.
The senior general said there are evidences that groups of drug dealer are operating secretly at the border, and Myanmar’s military is working to crack down the drug dealings asanational duty, and both countries should work together against it as it’s alsoabig problem for China.
He also told Gen. Fan that both countries should cooperate to clear out any illegal armed forces at the border, adding that Myanmar wishes for China’s help to handle the border issue in accord with its existing laws to keep it peaceful.
General Fan said Chinese military will work together with Myanmar’s counterpart for the issues such as the border’s stability, security and anti-narcotics at the meeting.He also met with President Thein Sein on that day in the capital to discuss bilateral cooperation and promoting the relationship between the two countries.